नेकपा नेता परियार परस्त्रीसंग आपत्तिजनक अबस्थामा होटेलबाट समातिए — Sanchar Kendra
२हस्ताक्षर सभालाई सम्बोधन गर्दै विप्लवले के भने ? हेर्नुहोस भिडियोसहित
नेकपा नेता परियार परस्त्रीसंग आपत्तिजनक अबस्थामा होटेलबाट समातिए
रमेश बन्जारा, हेटौडा । नेकपा मकवानपुरका नेता एब चुरियामाई माबिका प्रअ बिष्णु परियारलाई प्रहरी कार्यालय सिमरा बाराको टोलीले होटलबाट आपत्तिजनक अवस्थामा परस्त्रीसहित नियन्त्रणमा लिएको छ । शनिबार दिउँसो जीतपुर सिमरा १ स्थित सिमरा बजारमा रहेका होटल तथा लज चेकिङको क्रममा परियार र एक महिला आपत्तिजनक अवथामा समातिएका हुन् ।
हेटौंडा १६ का ४८ बर्षीय बिष्णु परियार र हेटौंडा ५ कि ३२ बर्षीय एक महिलालाई होटलबाट समातिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जानकारी दिएको छ । ‘सिमरा बजारमा रहेको दीप होटल, गोर्खाज होटल, झापाली होटल, नमस्ते होटल र रोजी होटलमा चेक गर्दा आपतिजनक अवस्थामा ९ जोडीलाई फेला पारेका हौं’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘समातिएका मध्ये एकजोडी हेटौंडाका हुन् भने बाँकी बारा र पर्साका रहेका छन् ।
बारा प्रहरीले ९ महिला र ९ पुरुष गरी १८ जनालाई समातेको छ । सिमरा क्षेत्रको होटलहरुमा अवैध यौनधन्दा हुने गरेको सूचनाको आधारमा बारा प्रहरीले विशेष अपरेशन चलाएको जानकारी दिएको छ ।
‘यस क्षेत्रको होटलमा यौनकर्मी राख्ने गरेको पनि जानकारी आएको हो’, ति प्रहरी अधिकृतले भने, ‘समातिएकाहरु पेसेबर यौन व्यवसायी हुन् वा श्रीमान् श्रीमति हुन् भन्ने बिषयमा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ समातिएकाहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा राखेर आवश्यक अनुसन्धान एवम् कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइएको छ ।
यस्तै उता जिल्ला अदालत बैतडीले दशरथचन्द नगरपालिका–९ ग्वाल्लेकमा सडक निर्माणका क्रममा डोजरले महिला हुत्याउने चालकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालतले डोजर चालक किशोर बोहरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।
जिल्ला न्यायधीश ईश्वरीप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले चालक बोहरालाई थुनामा पठाउनका लागि आज आदेश दिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायधिवक्ता भानदेव जोशीले जानकारी दिए ।
यस्तै अदालतले चालक बोहरालाई डोजरले हुत्याउन उक्साउने डोजर मालिक भानी जोशी, स्थानीयवासी भोजराज जोशी र धर्मानन्द जोशीलाई जनही रु ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । गत कात्तिक ४ गते ग्वाल्लेकको चिलाउनेमा सडक निर्माणका क्रममा स्थानीयवासी गौरी जोशीलाई डोजर चालकले हुत्याएको थियो ।
सडक निर्माण गर्ने र सडक निर्माण गर्न नदिने पक्षबीच विवाद हुँदा झडपसमेत भएको थियो । आफूहरुको जमीनमा जबरजस्ती डोजर चलाएको भन्दै सडक रोक्ने पक्षले अवरोध गर्दा डोजर चालकले महिलालाई हुत्याएको थियो । चालक बोहरालाई प्रहरीले कात्तिक ४ गते नै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
यस्तै डोजर चलाउन उक्साउने डोजर मालिक जोशी, स्थानीयवासी भोजराज र धर्मानन्दलाई कात्तिक ६ गते समातिएको थियो । सडक रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षका दुर्गादत्त जोशीलाई पनि सार्वजनिक स्थानमा शान्तिमा खलल पुर्याएको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेर प्रहरीले समातेको भए पनि उनी हाल प्रहरी हिरासतमै छन् । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर फाइल बुझाइसकेकाले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुङ्गो लगाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक किसन चन्दले जानकारी दिए ।
हस्ताक्षर सभालाई सम्बोधन गर्दा गर्दै मञ्चमा यसरी भक्कानिए विप्लव, हेर्नुहोस भिडियोसहित
हस्ताक्षर सभालाई सम्बोधन गर्दै विप्लवले के भने ? हेर्नुहोस भिडियोसहित